Lesona 3 Ireo mpivarotra atiny dia tokony hianarana amin'ny mpivarotra antsinjarany | Martech Zone
Lesona 3 Ny mpivarotra atiny dia tokony hianarana amin'ny mpivarotra antsinjarany
Asabotsy, Septambra 19, 2015 Alahady, Septambra 20, 2015 Douglas Karr
Erin Sparks dia mitantana ny sisin'ny radio Web, ny podcast izahay dia manohana sy mandray anjara isan-kerinandro. Nanjary mpinamana be izahay sy i Erin nandritra ny taona maro ary nifanakalo hevitra nahagaga tamin'ity herinandro ity. Nifanakalo hevitra momba ny ebook ho avy izay nosoratako aho rano mitsonika havoaka tsy ho ela izany. Ao amin'ny ebook, mandeha amin'ny antsipiriany momba ny fanamby amin'ny famolavolana paikady marketing atiny sy ny fandrefesana ny valiny aho.
Hevitra iray mitsingevana ao an-tsaiko ny ara-bakiteny mamolavola karazana maty, ary ny tsirairay amin'ireo dice dia a singa samihafa ampiharina amin'ny lohahevitra manokana. Ahodino ny dice ary fantaro ny zoro soratanao amin'ny atiny… angamba sary an-tsary miaraka amin'ny zava-misy, ny tantara ary ny fiantsoana hanao hetsika. Na podcast miaraka amina influencer izay mizara fandalinana andrana tokana. Na angamba calculatera azo ifandraisana amin'ny tranokala izay manampy amin'ny famaritana ny fiverenan'ny fampiasam-bola.
Ny atiny tsirairay dia mety miteraka lohahevitra iray ihany, saingy azonao atao an-tsaina ny fomba - mamorona - miavaka ihany koa ny sombin-javatra tsirairay ary manintona ny fikasan'ny mpihaino manokana. Rolling dice, mazava ho azy, tsy tena fomba mahira-tsaina haminavina sy hamokarana atiny misy dikany izay mamokatra ny valin'ny orinasa ilaina. Izay mitondra ahy amin'ny antsinjarany.
Ny zanako vavy, Kait Karr, niasa tao amin'ny fivarotana famatsian-tarehy nandritra ny roa taona. Nahafinaritra azy ilay asa, ary nampianatra azy taonina maro momba ny antsinjarany sy ny fomba nieritreretako ny paikadin'ny votoaty tato anatin'ny taona maro. Amin'ny maha mpitantana mandray ahy, ny zanako vavy dia niandraikitra ny vokatra rehetra niditra tao amin'ny magazay, niandraikitra ny fanisana ary ny fampirantiana ny varotra manerana ny magazay.
Lesona antsinjarany ho an'ny mpivarotra atiny
Inventory - Sahala amin'ny mahasosotra ireo mpitsidika fivarotana rehefa tsy misy vokatra tadiavin'ilay magazay dia very mpanjifa ianao satria tsy manana ny atiny ao amin'ny tranokalanao tadiavin'ny vinavina. Tsy mirona amin'ny paikady marketing amin'ny atiny ho toy ny fanaovana lisitra izahay satria mazàna ny mpivarotra no mamantatra izany rehefa mandeha. Fa nahoana izany? Maninona ny mpivarotra atiny no tsy mamorona lisitry ny atiny kely azo atao? Raha tokony hanontany hoe firy ny lahatsoratra bilaogy isan-kerinandro no tokony hamoaka orinasa, maninona no tsy mametraka fanantenana ny momba ny mpivarotra atiny ambaratongam-pahefana feno ilaina?
fanaraha-maso - Raha tokony hamorona tetiandro atiny izay manolotra lohahevitra mahazatra hosoratana mandritra ny volana manaraka, maninona isika no tsy manao fanadihadiana elanelana eo amin'ny lisitra takiana sy ny atiny efa navoaka? Ity dia hiantoka ny fanaovana kopia kely indrindra ary hanampy amin'ny famoahana ny atiny. Sahala amin'ny fananganana trano, ny rafitra dia azo hatsangana aloha, avy eo ny sub-system, ary amin'ny farany ny haingon-trano!
Promotions - Na dia manana vokatra taonina aza ny magazay dia misafidy ny hampifantoka ny fampiroboroboany ny vokatra tena mahasoa na vaovao isam-bolana ny fivarotana. Mianatra ny mpiasa, mivoatra ny fampielezan-kevitra, natao ny fampisehoana vokatra ary tetikady omni-channel hampiroborobo ny atiny novolavolaina mba hampitomboana ny tombom-barotra sy ny valiny. Rehefa mandeha ny fotoana, rehefa soloina ny vokatra sy ny tolotra dia mandefa hafatra sy fampiroboroboana tsara ny fivarotana mba hampitomboana hatrany ny valin'ny orinasa.
Noho io antony io dia mila manavaka ny soratra amin'ny marketing amin'ny atiny isika. Ny olona manana talenta fanoratana sy fanontana tsy mampino dia tsy midika hoe manana ny fomba fijeriny ilaina izy ireo amin'ny fanisana, famoahana ary fampiroboroboana ny varotrao ho an'ny orinasanao. Ity infographic avy any Uberflip ity dia mamakivaky ny kalitaon'ny mpivarotra atiny mahomby.
Pejy fandraisana: Avelako hapetrakao amin'ny die sy ny ebook ianao!
Tags: fanaraha-maso atinylisitra atinympivarotra atinyinfographic mpivarotra atinykalitaon'ny mpivarotra atinyfampiroboroboana ny atinymanakarama mpivarotra atinyantsinjaranyuberflip